सात वर्षअघिको कुरा हो, गौशाला वरपर धेरैबेरसम्म ठूलो जाम भयो । चर्को गर्मीको त्यो जामबारे कसैले ट्राफिक प्रहरीलाई सोध्यो– केको जाम हो यो ? ‘सवारी छ’ भन्ने जवाफपछि प्रश्नकर्ता जङ्गिए, राजा त हटिसके त, केको सवारी नि ? ट्राफिकले उनको जवाफलाई नसुनेझैँ गरी आफ्नो काम गरिरहे । गणतन्त्र दिवस या यस्तै कुनै समारोहमा भाग लिनका लागि तत्कालीन उपराष्ट्रपति परमानन्द झा गौरीघाटबाट टुँडिखेलतर्फ जाँदै रहेछन्, उनैका लागि बाटो छेकिएको रहेछ । मानिसहरू यति रुष्ट थिए कि तिनै ट्राफिकलाई हेर्दै एक बाइकवाला कराए– कसैले गोलीको नास गर्नेवाला छैन हौ के गरेको यस्तो ? अहिले पनि सवारीका नाममा हुने जामहरूमा सर्वसाधारणको नराम्रो गाली खानेमा ट्राफिक प्रहरी नै पहिलो नम्बरमा पर्छन् । तामझामहरू हेर्दा यस्तो लाग्छ, मुलुकको सिस्टमबाट राजा गए, राजसंस्था गयो, तर ‘राज’ गएन ।
गाडीदेखि हेलिकोप्टरसम्मको खरिद अहिलेसम्म चर्चामै छन् । विदेशबाट फर्कंदै गर्दा केही हवाईजहाजलाई अकाशमैँ घुमाइरहन बाध्य पारिएको कुरामा पनि सर्वसाधारणले लौन त्यस्तो किन गर्नुपरेको होला ? भनी प्रश्न गरे । हेलिकोप्टरबाटै सामूहिक खेतीको अवलोकन पछिल्लो चर्चाको विषय बन्यो । राष्ट्रपतिलाई लिएर अहिले जे–जे भइरहेको छ के ती सबै राष्ट्रपति आफैंले चाहेर भइरहेका छन् ? अवश्य नै नहोला । हाम्रो सुरक्षा प्रणालीले राजा र राष्ट्रपतिबीचको फरक नबुझिदिँदा राष्ट्रपतिले जनस्तरबाट आलोचना व्यहोर्नुपरेको छ । यद्यपि यो बहसमा राष्ट्रपतिले स्वविवेक प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नेहरू पनि छन् ।
राजा र राष्ट्रपतिको सबैभन्दा ठूलो फरक भनेको राष्ट्रपति जोसुकै भए पनि कहिल्यै राजा बन्न सक्दैनन्, तर समय परिस्थितिले राजालाई राष्ट्रपति बनाइदिन पनि सक्छ ।
राष्ट्रपतिका रूपमा हिजो शीतलनिवासमा रहँदा सामान्य व्यवहार नदेखाउनुभएको भए आज ललितपुरको मलपोखरीमा मर्निङवाकमा भेटिने डा. रामवरण यादवलाई माक्स लगाएर दौडिरहेका मानिसले नमस्कार गर्ने थिएनन् होला । तर, राजालाई त पूर्व भए पनि मर्निङवाकमा भेट्न गाह्रै पर्छ । यद्यपि डा. यादवले दुःखसुख गरेर बनाएको मेरो आफ्नै घर छ, राज्यको घर भाडालगायतको खर्च मलाई चाहिँदैन भन्न सक्नुभएको भए पूर्वराष्ट्रपतिका रूपमा उहाँको उचाइ कति बढ्थ्यो होला जस्तो चाहिँ लागिरहन्छ । राजा जन्मको आधारमा हुने र राष्ट्रपति मतको आधारमा हुने भएकाले पनि राष्ट्रपतिले आफूप्रति जनमत सकारात्मक बनाइराख्नु आवश्यक हुन्छ । राजा र राष्ट्रपति दुवैको समानताचाहिँ के हो भने दुवै राष्ट्रप्रमुख हुन् ।
भारतमा विगतमा चुनाव नलडेका नितान्त व्यावसायिक व्यक्ति अब्दुल कालमले सधैँ सर्वसाधारणसँग नजिक भएर कार्यकाल बिताए । प्रतिभा पाटिलले कुनै कार्यक्रममा कसैसँग बोल्न खोज्दा त्यहाँका सुरक्षाकर्मीले रोकेको देखिएन । हामीकहाँचाहिँ राष्ट्रपतिलाई अर्कै ग्रहबाट आएकोझैँ किन गर्ने ? हाम्रा राष्ट्रपतिको सम्पूर्ण सुरक्षा नेपाली सेनाले लिन्छ । भ्रमणका लागि पनि सुरक्षाबाटै स्वीकृति लिनुपर्छ । कार्यक्रमहरू सुरक्षा संयन्त्रसँगै मिलेर बनाइन्छन् । झट्ट हेर्दा अहिले जे भइरहेको छ त्यो सब राष्ट्रपतिले मात्रै गरेकोजस्तो देखिए पनि उहाँको हातमा सबै कुरा हुँदैन । तर, अस्वाभाविकझैँ लाग्ने कतिपय कुरामा उहाँले पनि ‘नो’ भन्न सक्नुपर्छ । जतिसुकै गरे पनि राष्ट्रपति राजा हुन सम्भव छैन । खुकुलोसँग जनतासँग नजिक हुन दिएर राष्ट्रपतिलाई राजा बनाउने अभ्यासबाट सुरक्षा संयन्त्र पछि हट्नुपर्छ ।